Mahazo trano avokoa ireo mpianatra miisa 1023 nangataka fisitrahana trano nahafeno antotan-taratasy fangatahana. Miala amin'ny trano avokoa araka izany manomboka amin'ity herinandro ity, aorian'ny ivoahan'ny lisitra ireo mpianatra niditra tsy ara-dalana tamin'ny trano. 4 isaky ny efitrano sisa ireo mpianatra raha nahatratra hatramin'ny 12 izany teo aloha.
Hampidirana mpianatra avokoa na ny eny amin'ny Cité Tsaramandroso na ny eny amin'ny Campus Ambondrona. Nezahina nampiarahina kosa ny mpianatra mitovy sampam-pampianarana sy fiaviana fa tsy nasiana resaka fikambanana intsony.